တခါတုနျးက ရှာတဈရှာမှာ မုဆိုးလငျမယား နှဈယောကျ ရှိတယျ ။ မိနျးမ ဖွဈသူက မုဆိုးအလုပျ လုပျနတေဲ့ ယောကျြားဖွဈသူကို ဒီအလုပျ လုပျတာ မကွိုကျရှာဘူး ။ ဒါနဲ့တနတေ့ော့ သူ့ယောကျြားကို..
" ရှငျ ဥပုသျလေး ဘာလေး စောငျ့ပွီး တရားလေး ဘာလေး လုပျပါဦးလား ၊ ရှာထိပျက ဘုနျးကွီးကြောငျး သှားပေါ့ " ဆိုပွီး လှတျလိုကျတယျ ။
အဲဒီမှာ မုဆိုးကွီးကလညျး စိတျလို လကျရ သှားရှာတယျ ။ ဘုနျးကွီးကြောငျး ရောကျလို့ ဘုနျးကွီးကို ကနျတော့ပွီး..
" တပညျ့တျောကို တရားတပုဒျလောကျ တိုတို တုပျတုပျလေး ဟောပေးပါ ဘုရား " လို့ တရားတောငျးတယျ ။
ဒီတော့ ဘုနျးကွီး ပေးလိုကျတဲ့ တရားလေးက..
" ကိုယျကွိုကျတာ ကိုယျလုပျပါ " တဲ့ ။
ဒါ အတိုဆုံး တရားပဲ တဲ့ ။ ဒီတော့ မုဆိုးကွီးက အံ့သွသှားတယျ ။
" အရှငျဘုရား တပညျ့တျောဟာ ဒီမုဆိုး အလုပျကို ကွိုကျနှဈသကျလို့ပဲ တောလိုကျမုဆိုး ဘဝနဲ့ ရပျတညျလာတာ (၅၅) နှဈတောငျ ရှိပါပွီ ။ ဒါပမေယျ့ ခုခြိနျထိ ဘာတိုးတကျမှုမှ မရပါလား ဘုရား ။ ခုလညျး ဘုနျးဘုနျးက ကိုယျကွိုကျတာ ကိုယျလုပျ ဆိုတော့ ဘယျနှယျ့မြား လုပျရပါ့ " လို့ လြှောကျတော့ ။
ဆရာတျောက ဒီနားလာခဲ့ လို့ချေါပွီး သူ့ကို အပျနဲ့ ထိုးလိုကျတယျ ။
ဒီတော့ မုဆိုး က " အား " လို့ ထအျော တာပေ့ါ ။ အဲဒီမှာ ဆရာတျောက မေးတယျ ။
" မငျးကို အပျနဲ့ထိုးတာ ကွိုကျလား ? " တဲ့။ ဒီတော့ မုဆိုးက ပွနျဖွတေယျ ။
" ဘယျကွိုကျပါ့မလဲ ဘုရား.. တပညျ့တျောက အပျနဲ့မပွောပါနဲ့၊ မကျြစောငျး ထိုးရငျတောငျ ကွိုကျတာ မဟုတျဘူး "လို့ပွောသတဲ့ ။
" ဒါဆို မငျးကိုအပျနဲ့ ထိုးတာတောငျ မကွိုကျဘူး ဆိုရငျ လေးနဲ့ပဈ ၊ မွှားနဲ့ပဈပွီး အသကျကို သတျဖွတျနတောဟာ ကိုယျ မကွိုကျတဲ့ အလုပျကို သူမြားကို သှားလုပျနတောပဲပေ့ါ "
လူတျောတျော မြားမြားဟာလညျး ဒီအတိုငျးပါပဲ ။ ကိုယျ့ကို သတျမှာကြ မကွိုကျဘူး ။ သူမြား အသကျကသြတျတယျ ။ ကိုယျ့ကို ညာပွောတာကြ မကွိုကျဘူး ။ သူမြားကတြော့ ညာပွောပွနျတယျ ။
တကယျတော့ ကိုယျ မကွိုကျဘူး ဆိုတဲ့ အလုပျတှတေိုငျးကို သူမြားအပျေါမှာ လုပျနတေတျတယျလေ ။ ဒါကွောငျ့ ဆရာတျောဟောတဲ့ “ ကိုယျကွိုကျတာ ကိုယျလုပျပါ ” ဆိုတဲ့ တရားလေးဟာ ပညာပါပွီး ထိရောကျလှပါတယျ ။
ဒီတရားလေးကို သိခှငျ့ရသှားကွ ကုနျသော စာဖတျသူ အပေါငျး တို့လညျး နစေ့ဉျ ကိုယျကွိုကျ သောအရာမြားကိုသာ သူတဈပါးအား ပွုမူပွောဆို ဆကျဆံ လုပျကိုငျနိုငျကွလို့ အကောငျးကံမြားကို သာ ဖနျတီးနိုငျကွပွီး ကောငျးကြိုးတှေ ရရှိခံစား နိုငျကွပါစေ ။
တခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ မုဆိုးလင်မယား နှစ်ယောက် ရှိတယ် ။ မိန်းမ ဖြစ်သူက မုဆိုးအလုပ် လုပ်နေတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ဒီအလုပ် လုပ်တာ မကြိုက်ရှာဘူး ။ ဒါနဲ့တနေ့တော့ သူ့ယောကျာ်းကို..
" ရှင် ဥပုသ်လေး ဘာလေး စောင့်ပြီး တရားလေး ဘာလေး လုပ်ပါဦးလား ၊ ရွာထိပ်က ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားပေါ့ " ဆိုပြီး လွတ်လိုက်တယ် ။
အဲဒီမှာ မုဆိုးကြီးကလည်း စိတ်လို လက်ရ သွားရှာတယ် ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရောက်လို့ ဘုန်းကြီးကို ကန်တော့ပြီး..
" တပည့်တော်ကို တရားတပုဒ်လောက် တိုတို တုပ်တုပ်လေး ဟောပေးပါ ဘုရား " လို့ တရားတောင်းတယ် ။
ဒီတော့ ဘုန်းကြီး ပေးလိုက်တဲ့ တရားလေးက..
" ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ " တဲ့ ။
ဒါ အတိုဆုံး တရားပဲ တဲ့ ။ ဒီတော့ မုဆိုးကြီးက အံ့သြသွားတယ် ။
" အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ဟာ ဒီမုဆိုး အလုပ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ပဲ တောလိုက်မုဆိုး ဘဝနဲ့ ရပ်တည်လာတာ (၅၅) နှစ်တောင် ရှိပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဘာတိုးတက်မှုမှ မရပါလား ဘုရား ။ ခုလည်း ဘုန်းဘုန်းက ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် ဆိုတော့ ဘယ်နှယ့်များ လုပ်ရပါ့ " လို့ လျှောက်တော့ ။
ဆရာတော်က ဒီနားလာခဲ့ လို့ခေါ်ပြီး သူ့ကို အပ်နဲ့ ထိုးလိုက်တယ် ။
ဒီတော့ မုဆိုး က " အား " လို့ ထအော် တာပေ့ါ ။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်က မေးတယ် ။
" မင်းကို အပ်နဲ့ထိုးတာ ကြိုက်လား ? " တဲ့။ ဒီတော့ မုဆိုးက ပြန်ဖြေတယ် ။
" ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ ဘုရား.. တပည့်တော်က အပ်နဲ့မပြောပါနဲ့၊ မျက်စောင်း ထိုးရင်တောင် ကြိုက်တာ မဟုတ်ဘူး "လို့ပြောသတဲ့ ။
" ဒါဆို မင်းကိုအပ်နဲ့ ထိုးတာတောင် မကြိုက်ဘူး ဆိုရင် လေးနဲ့ပစ် ၊ မြှားနဲ့ပစ်ပြီး အသက်ကို သတ်ဖြတ်နေတာဟာ ကိုယ် မကြိုက်တဲ့ အလုပ်ကို သူများကို သွားလုပ်နေတာပဲပေ့ါ "
လူတော်တော် များများဟာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ ။ ကိုယ့်ကို သတ်မှာကျ မကြိုက်ဘူး ။ သူများ အသက်ကျသတ်တယ် ။ ကိုယ့်ကို ညာပြောတာကျ မကြိုက်ဘူး ။ သူများကျတော့ ညာပြောပြန်တယ် ။
တကယ်တော့ ကိုယ် မကြိုက်ဘူး ဆိုတဲ့ အလုပ်တွေတိုင်းကို သူများအပေါ်မှာ လုပ်နေတတ်တယ်လေ ။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်ဟောတဲ့ “ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ ” ဆိုတဲ့ တရားလေးဟာ ပညာပါပြီး ထိရောက်လှပါတယ် ။
ဒီတရားလေးကို သိခွင့်ရသွားကြ ကုန်သော စာဖတ်သူ အပေါင်း တို့လည်း နေ့စဉ် ကိုယ်ကြိုက် သောအရာများကိုသာ သူတစ်ပါးအား ပြုမူပြောဆို ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြလို့ အကောင်းကံများကို သာ ဖန်တီးနိုင်ကြပြီး ကောင်းကျိုးတွေ ရရှိခံစား နိုင်ကြပါစေ ။